Uzbekistan dia mbola mamoaka firaketana hafarana hafarana hafa
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jolay 2021 dia nanafatra ovy 310 taonina i Ozbekistan, mitentina 35.4 tapitrisa dolara, izay isan'ny avo indrindra amin'ity vanim-potoana ity tao anatin'ny roapolo taona lasa, EastFruit tatitra nataon'ny mpandinika. Raha ny hevitr'izy ireo, ny fiakaran'ny hafarana ovy dia nahatonga ny fitoniana eo amin'ny tsena anatiny.
Ny firaketana taloha momba ny fanafarana ovy tamin'ny Janoary-Jolay dia voarakitra tamin'ny taona 2020. Araka ny filazan'ny State Statistics Committee, ny fanafarana ovy tao anatin'ny 7 volana 2021 tamin'ny volabe dia nihoatra ny import tamin'ny taon-dasa 79.1 taonina, na 34%.
Fanamarihana: ny angona ho an'ny taona 2019 dia natolotry ny mpandalina EastFruit, ho an'ny 2020-2021 - nomen'ny Komitin'ny Antontanisa momba ny statistikan'i Ozbekistan
Saika ny totalin'ny ovy (99.7%) nafarana tany Ozbékistan tamin'ny Janoary-Jolay 2021 dia nomena avy amin'ny firenena enina:
Iran - 119 taonina (38.5% amin'ny fitaterana entana);
Kazakhstan - 85.0 arivo taonina (27.4%);
Pakistan - 75.5 arivo taonina (24.4%);
Kyrgyzstan - 16.8 taonina (5.4%);
Netherlands - 8.1 2.6 taonina (XNUMX%);
Russia - 4.2 arivo taonina (1.4%).
Firenena hafa - arivo taonina (1%).
Saika tsy misy fanondranana ovy avy any Ozbekistan. Araka ny filazan'ny Komitin'ny fadin-tseranana an'ny Repoblika, ny fiandohan'ny volana Janoary 2020 ka hatramin'ny faran'ny Jolay 2021, izany hoe tao anatin'ny 1,5 taona mahery, dia 2.9 taonina fotsiny ny totalin'ny fanondranana ovy.
Araka ny naseho tao amin'ny fitaovana fandalinana EastFruit “Ovy any Ozbekistan - inona no nahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana ary azo ahena ve izany amin'ny ho avy?”, tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny fitomboan'ny hafarana ovy dia iray amin'ireo antony niantohana ny fitoniana eo amin'ny tsena anatiny.
Tadidio fa tamin'ny Janoary-Jona 2021, ovy mihoatra ny 1.5 tapitrisa taonina vokatra any Ozbekistan, izay 3.5% mihoatra ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Miaraka amin'ny fiakaran'ny volan'ny import hatramin'ny 310 taonina tamin'ny Janoary-Jolay 2021, ity dia manazava ny zava-misy fa ny vidiny ankehitriny dia mitovy amin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa. Hatramin'ny 9 septambra 2021, ny salan'isa ambongadiny ho an'ny ovy any amin'ny tsena renivohitra Ozbekistan dia 3000 vola / kg (0.28 $ ny kilao). Tamin'io daty io ihany tamin'ny taona 2020, ny vidin'ny ambongadiny ho an'ny ovy dia mitovy - vola 3000 / kg (0.29 $ per kg).
Ny vidin'ny ovy any Georgia dia avo noho ny tamin'ny taon-dasa, mety ho olana ny fanafarana tiorka
Afrika atsimo: Ovy lafo vidy 22% bebe kokoa noho ny toetrandro mangatsiaka any Limpopo
Tatitra: Nihena ny varotra vokatra ovy nivaingana, fanarenana entin'ny fanafarana avy any Amerika
Robotika: fanampiana mandeha ho azy ho an'ny toeram-piompiana
GROUP SORMA dia MAMPANDROSO NY PACK ECO-FRIENDLY NATAON'NY PAPER 100% azo averina